Qatar: Mizaka ny fanovàna laharan’antso ho isa valo ireo mponina · Global Voices teny Malagasy
Qatar: Mizaka ny fanovàna laharan'antso ho isa valo ireo mponina
Voadika ny 01 Aogositra 2010 11:06 GMT
Tamin'ny Zoma, nanampy laharana fahavalo amin'ny laharan'antso fampiasa amin'ny finday sy telefaonina mampiasa tariby rehetra eran'ny firenena i Qatar. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa io fanovàna io dia ezaka hamoronana laharan'antso misimisy kokoa hatrany ao amin'ny firenena izay nitombo avo roa heny ny isan'ny mponiny nandritra ny dimy taona farany teo.
Hukoomi, tranonkalan'ny governemantan'i Qatar, dia manazava ny fiovàna:
Araka ny tetikasa, hiverina in-droa ny isa voalohany amin'ny laharan'antso an'ny telefaonina mampiasa tariby sy ny finday.
Fanampin'izay, raha nanomboka tamin'ny 3, 4, 5, 6 na 7 ny laharan'antsonao taloha dia averinao fotsiny ny isa voalohany toy izao 33, 44, 55, 66 ary 77…
Ireo laharan'antso vonjitaitra rehetra any Qatar, anisan'izany ny 999 sy 112, dia tsy voakasik'io fanovàna io, ary hijanona +974 ny laharana famantarana ny firenena.
Ireo laharan'antso miatomboka amin'ny 1, 2, 8 ary 9 dia tsy hiova.
Na dia natahotra ary ireo mponina tamin'ny voalohany fa sao dia hiteraka korontana hielipatrana ny fanovàna, toa tsy dia nisy olana loatra ny fanaovana ny fifindràna.
Izany dia saika noho ireo rindram-baiko maro fanovàna laharana ho an'ny finday izay manavao amin'ny fomba mandeha ho azy ireo lisitry ny mpifandray amin'ireo mpampiasa azy.
Na izany aza dia tsy ny rehetra no nahita fahombiazana tamin'ireo rindram-baiko ireo.
Tao amin'ny Twitter, niteny i @NazQatar:
Misaotra nanambatra ny lisitry ny laharan'antsoko tamin'ireny rindram-baiko ireny!! TSY manamboatra ireo laharana rehetra miatomboka amin'ny 00974 ilay izy #Qatar
@omerm27 niteny hoe:
toa efa mahasosotra sahady izy ity. vao adiny roa fotsiny izay
Ireo hafa dia nankasitraka kokoa (sady nanesoeso) ilay tetikasan'ny laharan'antso vaovao.
Tao amin'ny Facebook, niteny i Fahad Qureshi:
Satria marobe ny olona miditra ao amin'ity firenena ity dia tsy ampy intsony ireo laharan'antso tpt….ka izao dia miverina in-droa daholo ny isa voalohany amin'ireo laharan'antso rehetra….raha mieritreritra ny hiantso ahy ianao amin'ny manaraka tpt…havaozy ny lisitry ny laharan'antsonao.
Tao amin'ny Twitter, niteny i mohamed:
Ny tombony amin'ny nanovàn'ny orinasam-pifandraisan-davitra any Qatar ny endriky ny laharan'antso dia ny hahavitsy ny olona ho antsoiko androany. #antisocial
Ary na toa nizotra am-pilaminana aza ny fanovàna, mbola matahotra ny sasany momba ny mety ho voka-dratsin'ny fananana laharan'antso vaovao.
Tao amin'ilay “forum” ara-tsosialy malaza Qatar Living, niteny i ajmani:
Tsy maintsy havaozina daholo ireo karatra fandraharahàna rehetra, antontan-taratasy, famintinana, ireo tranonkala miresaka asa sy tranonkala hafa rehetra, sns… tsy mino aho hoe efa nahavita izany daholo ny tsirairay! Manantena aho fa hisy hafatra voarakitra handeha rehefa misy olona miantso ireo laharan'antso taloha, manoro azy ireo hanampy 3, na 4 na 5 na 6…!
Mazava ho azy, mandritra ireo telo volana manaraka dia haheno hafatra voarakitra ireo miantso ireo laharan'antso niisa fito, hampahafantatra azy ireo momba ilay endrika vaovao.
Mbola ho hita eo izany raha hanana fotoana hizàrana amin'ilay endrika fanavaozana laharan'antso ireo olona lasa niala sasatra mandritra ny lohataona sy ny Ramadany.